ယာဉ်မောင်းတစ်ဦး၏ ဆန္ဒ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ယာဉ်မောင်းတစ်ဦး၏ ဆန္ဒ
Posted by ကထူးဆန်း on Jun 3, 2012 in Opinions & Discussion | 29 comments
ကားတွေ စည်းကမ်းဖောက်တာ ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးကြ ပြောကြတာလည်း ကြာပါပြီ။ လူတွေလည်း သေခဲ့ကြ သေဆဲပါဘဲ ။
ဒါပေမဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲများနှင့် လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကတော့ သတင်းစာထဲမှာဘဲ အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာဘဲ လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းနေပါတယ်။ ဘယ်တော့များ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသ်ိမ်းမှု့တွေလုပ်မလဲလို့ မျှော်ရင်းနဲ့ မျှော်သူမောရပါပြီ။
မီးပွိုင့်မှာ ရှိတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ အရေးကြီး ယာဉ်တန်းရှိမှ ရုံထဲက ထွက်တဲ့ အကျင့် ပြင်ဖို့လိုပါပြီ။ ၀င်ငွေပိုကောင်းနိုင်မဲ့ လိုင်စင်စစ်တာ ၊ ကုန်ကားတွေ ၊ ကားငယ်တွေ လုပ်ငန်းလိုင်စင် စစ်တာတွေ ရပ်ပြီး ယာဉ်မောင်းတွေ စည်းကမ်းသေ၀ပ်အောင် ထိန်းသ်ိမ်းတဲ့ အလုပ် ဦးစားပေးလုပ်သင့်နေပါပြီ။
စည်းကမ်းရှိတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေ မောင်းမရလောက်အောင် စိတ်ညစ်ညူးအောင် စိတ်မရှည်လောက်အောင်ဖြစ်နေတာတွေကို ထိန်းသိမ်းသင့်ပါပြီ။
တကယ်တော့ စည်းကမ်းရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ က ကားတွေ ဒီလောက် လမ်းပိတ်ဆို့မူ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ စည်းကမ်းမရှိကြတဲ့ အတွက် ပိတ်ဆို့ ကုန်တာပါ။
နောက် လမ်းတွေမှာ ဘယ်လိုစည်းကမ်းလေးတွေ ပြောင်းလဲရင် လမ်းပိတ်ဆို့တာ သက်သာမယ် စည်းကမ်းလိုက်နာသူများ ဖြစ်မလဲဆိုတာ သုတေသနပြု လေ့လာပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ။
ဥပမာပြောရရင် .. မီးပွိုင့်တွေမှာ ယာဉ်လိုင်း မကူးရ မျဉ်းသေတွေဟာ ယခုထက် ပို ရှည် သင့်ပါပြီ ။ ယခု ယာဉ်လိုင်းမျဉ်းသေ တွေဟာ ဟိုလွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာ ကထဲ ကအတိုင်းပါဘဲ … ကားတွေများလာတဲ့ အတွက် မျဉ်းသေလိုင်းပိုရှည်ပြီး ကားတွေ တန်းစီတဲ့ အကျင့်ဖြစ်အောင် ၀င်ရောက်ထိန်းသိမ်းသင့်ပါပြီ ။
နောက်တစ်ခု ကတော့ အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ကားလမ်း ဘက်ပြောင်းမောင်းခွင့် ပေးတာပါဘဲ။ ဥပမာ .. နံနက်ရုံးတက်ချိန်ဆို မြို့ထဲဝင်တဲ့ ကားတွေများတဲ့ အတွက် မီးပွိုင့် နားတွေမှာ ကွေ့ကားကို လမ်းတစ်ဘက်ကနေ မောင်းခွင့်ပေးတာမျိုး ၊ ယာဉ်ကြော သုံးကြောက ကနေ လေးကြောအထိ တိုးမြှင့်ပြီး မောင်းခွင့်ပေးတာမျိုး လုပ်သင့်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆမိပါသည် ။ ထို့အတူ ရုံးဆင်းချိန်ဆို မြို့ထဲမှ ထွက်ခွာတဲ့ ကားတွေဘက်ကို ယာဉ်ကြော လေးကြော ပေးတာမျိုးလုပ်သင့်ပါသည် ။ ဘန်ကောက်မြို့မှာ အဲ့ဒီလို လုပ်ဆောင်မှု့မျိုး သတိထားမိခဲ့ပါသည်။
ဒါဆိုရင် စည်းကမ်းရှိတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေအတွက်လမ်း တရားမျှတစွာ မောင်းခွင့်ရမှာပါ ။ ယခုတော့ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ ကားတွေက ယာဉ်ကြော ပြောင်းပြန်မောင်းပြီး ကျော်တက်ပြီးမှ အထဲ အတင်းပြန်ဝင်တိုးနဲ့ စိတ်တို စိတ်ရူပ်စရာတွေဖြစ်စေပါသည်။
အခုလောလောဆယ် အကောင်းဆုံးဥပမာ အနေနဲ့ ပြရရင် ဦးဝိစာရ မီးပွိုင့်မှာ သစ်ပင်တွေခုတ်ပြီး ကွေ့လမ်းတိုးချဲ့ပေးလိုက်တာဟာ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှု့ကို သိသိသာသာ ကျသွားစေပါတယ် ။ စည်းကမ်းမဲ့စွာ ကွေ့လမ်းတွေကနေ မကွေ့ဘဲ တည့်တည့်သွားဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ ကားတွေသာ မရှိရင် ဒါထက် ယာဉ်ကြော ပိုချောမွေ့မှာပါ ။
ယာဉ်ကြောတွေ ဘယ်လောက်တိုးတိုး ယာဉ်မောင်းတွေ စည်းကမ်းမရှိရင် ကားတွေကြပ်မြဲ ကြပ်ဦးမှာပါ ။ ဒါတွေကို ကူညီထိန်းကျောင်းပေးဖို့ကတော့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ ရဲ့ တာဝန်သိမှု့လုပ်ဆောင်မှု့တွေလိုအပ်နေတာပါ ဘဲ ။
ကားလမ်းတွေ မတိုးချဲ့နိုင်ခင်၊ ကားရပ်နားရန် နေရာတွေ မတည်ဆောက်နိုင်ခင်မှာ အလျင်အမြန်နဲ့ ကား ကြပ်တာတွေ လျှော့ကျအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တာကတော့ ယာဉ်ထိန်းရဲများ ပါဘဲ ။ အမြန်လေ့ကျင်သင်ကြားပေးနိုင်သလို ပတ္တရောင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနဲ့လည်း အမြန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည် ။
စိတ်ကူးယဉ်ကောင်းပြီး ဘတ်ဂျတ် ကုန်တဲ့ မီးပွိုင့်တွေမှာ CCTV ကင်မရာတွေ တပ်မှာ တပ်တာ၊ ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ CCTV မှတ်တမ်းကင်မရာတွေ တပ်မယ်ဆိုတာတွေကို လျှော့ချပြီး လက်တွေ့ကျတာ အမြန်လုပ်သင့်ပါပြီဖြစ်ကြောင်းဆော်သြနိုးဆော်လိုက်ပါရစေ။
တစ်ဘက်ကားလမ်း၏ အလယ်လမ်းကြောင်းထိရောက်နေသော ဘတ်စ်ကား
လမ်းကြောင်းမှန်၏ အတွင်းဆုံးလမ်းပြန်ဝင်ရန် အတင်းတိုးနေသော ဘတ်စ်ကား
မနက် ၉း၁၅ ခန့် ရုံးတက်ရက် မှာတောင် ရျင်းသွားတဲ့ ဦးဝိစာရ မီးပွိုင့် ( ကျောင်းတော့မဖွင့်သေးပါ)ယခုလို လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ချီးကျူးပါသည်။
တန်းစီနေတဲ့ ကားတွေ ကျော်ပြီး ရှေ့ကနေ ကျော်ဖြတ်ဝင်တဲ့ တက်စီကား ၊ သူပိတ်တော့ တည့်တည့်သွားမဲ့ ကားတွေရပ်စောင့်ပေါ့
တန်းစီနေတဲ့ ကားတွေ အားလုံးကို တစ်ဘက်ကားလမ်းကနေ ကျော်ဖြတ်သွားတဲ့ တက်စီ။ ပြီးရှေ့ကျရင် အတင်းပြန်တိုးဝင်တော့မယ်လေ။
ဒီလိုဝင်ငွေ ကောင်းမဲ့ အလုပ်ဘဲ လုပ်တော့မှာလား
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ ၀င်ငွေ ကောင်းတဲ့ လိုင်စင်စစ် တဲ့ အလုပ်ဘဲ လုပ်နေကြတော့မှာလား
(အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ ရိုးနေတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ပါမယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဘဲ တွန်းနေမှ ရွေ့နိုင်မှာလို့ခံယူမိသည့်အတွက် ထပ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်)
ကျုပ် လာမန့်ကြည့်တာ …
လိုင်းကားတွေ တစ်စီးလောက် .. တစ်စီးလောက် ဆိုပြီး
အတင်း ဖြတ်ဝင်တာတော့ ..
နေ့တိုင်း မမြင်ချင်အဆုံးပါပဲ ..
ရန်ကုန်မှာ တစ်ချို့ လမ်းတွေခင်းနေတော့
ကားတွေ စည်းကမ်း မရှိတဲ့ ပြဿနာတွေက ပိုပြီး ဆိုးလာတာပေါ့ဗျာ ..
စီဂျေ ပီသအောင်ကို တော်ပါပေတယ်။
မျဉ်းသေ လိုင်းကျော်တက်ပြီး အလုအယက်ဝင်လို့ ကားတစီးကြောင့် ကားတွေ အများကြီး အချိန် ကြန့်ကြာပြီး လမ်းပိတ်တာတွေ ခဏခဏ ဖြစ်တယ်။
အခု မြို့ထဲ လမ်းတွေမှာ ကားတွေ သိပ်များနေတာ သိပ်သိသာတာပဲ ကားမောင်းလို့ မကောင်းဘူး။
တနေရာနဲ့ တနေရာ ကားမောင်းသွားရမှာ တော်တော် ကြောက်နေပြီ။
ကားသမားတွေကို စည်းကမ်း အတွက် အရမ်းကြပ်မှ ဖြစ်တော့မယ် ထင်တယ်။
ဟွန်းမတီးရ ဇုံတွေ လုပ်ပြီး ဖမ်းတာ မြို့ထဲမှာ ဟွမ်းတီးသံ ပျောက်သွားသေးတာပဲ။
လုပ်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။ မလုပ်လို့ မဖြစ်သေးတာပါ။
မျဉ်းသေ ဖြတ်လို့ ဖမ်းတဲ့ လူတွေ တခါတည်း ချာလန် ဖြတ်ပြီး အခွန်ကောက်ခိုင်းလိုက် ရုံးကို မလာခိုင်းပဲ တခါတည်း ဖြတ်.. ဖြတ်ပေးတဲ့ ရဲသားကြီကို ကော်မရှင်သာ ပေးလိုက်စမ်းပါ.. ကားသမားတွေ လျှာပေါ် မြက်ပေါက်ပါစေ မျဉ်းသေ မဖြတ်ရဲဘူး ဖြစ်သွားမယ်။
စီစီတီဗွီတွေ..မော်တော် ပီကယ်တွေ ငါတို့အူးထူးဆန်းလောက်တောင် အသုံးမကျဘူး..
ဟိုကောင်ဒွေက သောက်သုံးမကျတဲ့စက်ဒွေ ကောင်ဒွေ..ငပျင်းတွေ..ကပ်ဖားယက်ဖားဒွေ..
သူ့ မေလင်လာတဲ့အချိန်လောက်သာ စည်းကမ်းရှိပြချင်တဲ့ကောင်ဒွေ….
ဒုတိယပုံမှာ အူးထူးဆန်းကိုဒေါင် တစ်စီးလောက် ဖမ်းတောင်းနေလိုက်သေးဒယ်..
မခန့် တာ..မခန့် လိုက်ပုံများ..
ကိုရင်ထူးဆန်းက.. ဘယ်လိုဆန္ဒထားတယ်တော့မသိ… မန့်လို့ရအောင် ကျုပ်လုပ်လိုက်တာပါ..
လမ်းပေါ်တက်မောင်းနေတဲ့ကားတွေ.. ကားအာမခံမဖြစ်မနေထားဖို့ လုပ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်..
ဒါမှ.. ၀င်တိုးတဲ့ကားကို.. .လမ်းမှန်ကားက. အတိုးမခံပဲ… ၀င်တိုက်ရဲမှာပေါ့..
ရဲတွေက.. Fines and Tickets တစ်ကက်(ဒဏ်ငွေပေးဆောင်စေခြင်းစနစ် )ပေးတဲ့စနစ်လုပ်ပေးရမယ်ထင်ပါတယ်..
ဒါမှ.. ပြသနာတခုခုတက်ရင်.. ဘယ်သူမှားတယ်..မှန်တယ်.. သိလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်..။
သဘောက.. ကားတိုးဝင်ပြီး.. လမ်းကြောင်းမှားပြီး.. တစ်ကက်ရဘူးတဲ့ကားဟာ.. နောက်တချိန်အဲလိုအခြေမျိုးမှာ.. ထပ်ထပ်လုပ်တတ်တာမို့.. အမှားအမှန်ကို.. လမ်းမှာတင် သိနိုင်ပြီး..အပြစ်အရ.. ပေးဆောင်ရမယ့်ဒဏ်ငွေကိုလည်း.. တင်သွားနိုင်မှာမို့ပါ..။
တစ်ကက်စနစ်ဟာ.. လူတွေကိုလည်း.. ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တန်ဖိုး ထားတတ်လာနိုင်ပါတယ်..
ဥပမာ.. တစ်ကက်ခဏခဏရဖူးသူဟာ.. နိုင်ငံခေါင်းဆောင်..နိုင်ငံရေးသမား.. လုပ်ရခက်သွားတာမျိုးကြောင့်.. ရည်မှန်းချက်ကြီးထားသူတွေက.. တစ်ကက်မရအောင်..စည်းကမ်းရှိစွာနေတတ်သွားပါတယ်..
တောင်ဆိုးသေးတယ်။ ဒရိုင်ဘာ စပယ်ယာ ယာဉ်ထိမ်းရဲ အားလုံး
အတူတူနီးပါးပဲ။အကုန်ပြောနေကြလည်း ဒီအတိုင်းပဲ မောင်းတဲ့သူ
ရော နောက်လိုက်ရော ယာဉ်ထိန်းရဲရော ရှက်မရှိကြဘူး
တကယ်တော့ ယဉ်ထိန်းရဲကို အရေးယူမယ့် အဖွဲ့တခုကို လိုနေတာ..
စည်းကမ်းထိန်းရမယ့်သူက မထိန်း/ တမင်လွှတ်ပေး / သူတို့ပါ စည်းကမ်းမရှိတော့
ကြာလေ ဆိုးလေ ဖြစ်နေမှာပဲ..။
အထူးသဖြင့်တော့ ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ တက္ကစီတွေ စည်းကမ်းဖေါက်ရင် အရေးမယူဘူး..
အဲဒီနှစ်မျိုး စည်းကမ်းရှိသွားရင်ကို လမ်းကျပ်တဲ့ ပြဿနာ တော်တော်ကင်းသွားမှာ…။
ယာဉ်ကြောကို တမင် ပြောင်းပြန်ထွက်မောင်းတယ်ဆိုရင်-
လုပ်သင့်တာက အဲဒီလူကို လိုင်စင်အပြီးသိမ်းပြီး ဘယ်တော့မှ လိုင်စင်ပြန်မပေးသင့်ဘူး။
အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကြောင့် အသက်အန္တရာယ်တွေ အများကြီးဖြစ်နိုင်တာ..။
လိုင်စင် သိမ်းလည်း ခိုးမောင်းမှာပဲ လိုင်စင် စစ်တဲ့ အခါ ညီလေး အကိုကြီး ဆင်လေး ယူလိုက် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပဲ။
တခါတည်း အချုပ်ကားနဲ့ တပ်မ တခု ချီတက်လာပြီး လမ်းပေါ်မှာ မိတယ် ဆိုတာနဲ့ ရဲသားကြီး တယောက် ကားတက်မောင်းပြီး မောင်းတဲ့ လူကို အချုပ်ကားပေါ်တင်ခေါ်သွားပြီး တပတ်ချုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် အရမ်း လန့်သွားလိမ့်မယ်။ နမူနာ ၁၀ ယောက်လောက်ပဲ လုပ်ပြလိုက် အချုပ်ကား မြင်တာနဲ့ ကားသမားတွေ အရှိန်လျော့သွားလိမ့်မယ်။
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ က ကားကိုယ်စီ၊ စက်ကိုယ်စီ နဲ့အုပ်စုလိုက် အလုပ်လုပ်ကြတာ။
ကွန်တင်နာ ကားကြီးတွေ ဖြတ်တဲ့လမ်း၊မြို့ ပြင်ထွက်တဲ့လမ်းတွေ ဆိုရင် သူတို့ စားကွက်ပဲ။
ဖမ်းတဲ့သူက တစ်နေရာ၊ သတင်းပို့ တဲ့သူကတစ်နေရာ၊ အပွင့်နဲ့ က တစ်နေရာ၊စစ်ဆင်ရေးက ကွက်တိပဲ ။
ဘယ်လိုကားမျိုးကို ဖမ်းစစ်ရမလဲဆိုတာ ခပ်လှမ်းလှမ်းက စက်နဲ့ ပေါက်လိုက်တယ်။
“ ရထားဖြစ်တယ်။ ” ဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ယောက်က လမ်းလယ်ဆင်း ကားကိုတား ဟောက်စား ငွေတောင်းတာပဲ။
တချို့ ကားကြီးတွေဆို တားလိုက်တာနဲ့အရှိန်လျှော့
ကားပေါ်ကနေ လက်ထုတ်၊ ကားအောက်ကနေလက်လှမ်း အဆင်ပြေနေတာပဲ။
အဆင်မပြေတာက ကျွန်တော်တို့ ဗျ။
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ ကလမ်းလယ်ခေါင်မှာ ကားကြီးကိုတားပြီး ဈေးညှိနေတော့
အနောက် ကလိုက်လာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကားက လမ်းပိတ်နေတော့ဆက်သွားလို့ မရ။
တစ်ခါတစ်လေ ကားကြီးနောက်က ကပ်လိုက်မောင်းရတဲ့အခါ
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ က ရုတ်တရက်တားလိုက်တဲ့အခါ
ကားကြီးကလည်းရုတ်တရက် ရပ်လိုက်တော့ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တော့မလို့ ။
ရှိပါသေးတယ်။တခြားသူတွေ မန့် ဖို့ ချန်ထားမယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်လိုက်ရင် ၁ကျပ် ဆို အမှုဖွင့်ရင် ၁၀ကျပ် ကုန်တယ်။
ကိုယ်တွေမို့ပြောတာ။
အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ လူပန်းတာပဲ။
အကျိုးရှိတာက ရဲ နဲ့တရားရုံး။
မီးပွိုင့်မှာရပ်ထားတာ ပေါ်တင်မူးပြီး လမ်းပြောင်းပြန်ဝင်တိုက်သွားတာ။
နာမည်ကြီး co.တစ်ခုရဲ့ကားပါ။ co.ကတာဝန်မယူဘူး။မလျှော်ဘူး။
ယာဉ်မောင်းကို အလုပ်ထုတ်တယ်။ယာဉ်မောင်းမလျှော်နိုင် တရားရုံးက ပေးတဲ့အပြစ်ခံမယ်ပေါ့။
co.က ဘယ်လိုပေးကမ်းလည်းတော့မသိဘူး၊ တရားရုံးကလည်း အမှုအတွက်ဘာမှအကြောင်းမကြား။
သွားစုံစမ်းမှ စစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစောင့်ခိုင်း၊တရားသူကြီးက အခန်းထဲမှာ……။
ရှမ်းပြည်သားက ရှေ့ နေဆိုတော့ ဘယ်လိုပညာပေးထားတယ်သိမှာပါ။
တစ်သက်တစ်ကိုယ်တစ်ခါမှ တရားရုံးမေ၇ာက်ဘူး ပါဘူး။
ကိုယ်မှန်လို့ သာ ကိုရှမ်း ပြောသလို သွားဖိုက်တာပါ။
ရွံဖို့ လည်းကောင်းတယ်။ ၂ ခါလောက်သွားပြီးထပ် မသွားတော့ပါဘူး။
ကိုရှမ်းလို စိတ်ထားကောင်းနဲ့မတရားခံရတဲ့ တရားခံအတွက် (သို့ )တရားလိုအတွက် အမှန်တရားဘက်တော်သားတွေ များများပေါ်ပါစေ။
ကိုထူးဆန်းရေ… ထူးအိမ်သင် သီချင်းစာသားလေးကိုဘဲ စာသားပြောင်းပြီး တိုးတိုးလေး ဆိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ ။
“ တစ်နေ့ နေ့ တော့ ဖြစ်ရွေ့ လာလိမ့်မည် ”
ကျွန်တော် ကွန့်မန့်ပိတ်မထားပါဘူးခင်ဗျာ ။ ပိတ်ထားလား ဖွင့်ထားလားလည်း မကြည့်မိ သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး။ အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မနက်စောစော ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတုန်းတင်ထားခဲ့ပြီး အခုမှ ကွန်ပြူတာရှေ့ ပြန်ရောက်မှ သိရတာပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူကြီးရေ ။ ပြန်ဖွင့်ပေးတာ။
အောက်ဆုံးပုံကလို ၀င်ငွေကောင်းမယ့် အလုပ်လေး
ထူထောင်ဖို့ အရင်းအနှီးစုတော့ရင်ကောင်းမလား… အူးထူးဆန်း
ဘတ်စ်ကားတွေ စည်းကမ်းမဲ့ဒယ်… ၄ ၅ ၆ ရာ ရဖို့အတွက်
အသက်တွေ အများကြီး တင်ထားပြီး ကားတွေ ကျော်တက်ကြတယ်..
်တွေးမိတဲ့ အချက်တစ်ခု ပြောရရင် ယာဉ်မောင်းတွေ စည်းကမ်းမရှိတာ ကတော့ အဓိကလို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းကို ထိန်းသိမ်းရမဲ့ လူတွေကိုယ်တိုင်က စည်းကမ်းမရှိတော့ ပိုဆိုးသွားတော့တာပေါ့။
ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ပြောကြသလို ပိုက်ဆံရမဲ့ အလုပ်ကိုပဲ လုပ်နေကြ၊ သူတို့အဘတွေလာတော့မှ ထွက်လက်ပြ ဆိုတဲ့ အကျင့်တွေ ပြင်ရမှာပါပဲ။
စည်းကမ်းဖေါက်တဲ့လူ ရှိတာမှန်ပေမဲ့ အတိအကျ အရေးယူကြမယ်ဆိုရင် အဖြေတစ်မျိုး ထွက်နိုင်ပါတယ်။
အမှားလုပ်တဲ့ ကားတစ်စီးကိုတားတယ်။ ပြီးတော့ လုပ်ရမှာက တစ်ခါတဲ အရေးယူ၊ ဖြတ်ပိုင်းဖြတ်။ ဒါကိုမလုပ်ပဲ စကားပြော၊ မိန့်ခွန်းခြွေ၊ ကားသော့ ဆိုင်ကယ်သော့ကို ယူပြီး လူမမြင်နိုင်တဲ့ သူတို့ တဲထဲ။ ဒါမှမဟုတ် ကားနောက်ခန်းကို သွား။ ပြောကြဆိုကြ။ ဆင်လား ။ ခြင်္သေ့လား ဒီလို လုပ်နေသရွေ့ မပြီးသေးသော ပန်းချီကားပေါ့။ ဒီတော့ ယာဉ်ထိန်းတားရင် ပိုက်ဆံတောင်းတာပဲလို့ လူတွေက နားလည်ထားကြ၊ လက်ခံထားကြ။ အမှားလုပ်တယ်။ ပြီးရင် ပိုက်ဆံပေးလိုက် ပြီးတာပါလို့ အတွေးဝင်။ အမှားလုပ်လို့ တားရင် ဒီကောင်တွေ ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ ရစ်တယ်လို့ဆိုကြ။ ယာဉ်ထိန်းများကလည်း ပိုက်ဆံတောင်းမှ ငါတို့ အနေချောင်မှာဆိုပြီး အပွင့်တွေအထိ အဆင့်ဆင့် ဆက်လုပ်ကြ။ ဥပဒေရဲ့  အထက်မှာ ဘယ်သူတွေ ရှိသလဲ???????? စဉ်းစားစရာ ပြောစရာ တွေကအများသား။ တောင်ပိုင်းသား လို ကျွန်တော် တွေးဘူးတယ်။ ဘန်ပါကောင်းတဲ့ ဂျစ်ကားတစ်စီးလောက် ၀ယ်၊ မြို့ ထဲ သွားမယ်။ အဲ မှန်တဲ့ အတိုင်း မောင်းမယ်။ မှားလာတဲ့ကောင် တယ်ထားပေးလိုက်မယ်လို့။ တောင်းအေ့စ် ပစ်ကပ်နဲ့ နှစ်ခါလောက် လုပ်ဖူးတယ်။ သူများကားဆိုတော့ မလုပ်ရဲတာနဲ့ နောက်တော့ စ်ိတ်လျှော့ထားရတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ချင်ရင် ၀င်းမြန်မာဂျစ်ပုံဟောင်းက ကားကြောလဲမာတယ် ၊ ကားလဲလေးလို့ စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိတယ်။
အင်ဂျင်သရီးစီ မန်နျူရယ်မို့ ဂီယာကြီးနဲ့ နင်းပြီး ထည့်လို့ ကောင်းတယ်။
ကိုယ်မှန်အောင်မောင်းပြီး မှားတဲ့ကောင်ကို ဖြတ်ဖဲ့ပစ်လိုက်- ပုံ ၄ ထဲက တက္ကစီလိုဟာမျိုးကိုပေါ့။
မျက်နှာချင်းဆိုင်ယာဉ်ကြောက ကျော်တက်လာတဲ့ကောင်တွေကို ခေါင်းတည်ပေးလိုက်…. ပုံ၅ ထဲကကောင်မျိုးပေါ့…။
…………….လို့ ကျုပ်က အကြံမပေးပါဘူး။ မလုပ်ကြပါနဲ့။ စိတ်လျော့ကြပါ …
တစ်လ အတွင်း ကားဖိုး အရင်းကျေ မယ့် စီးပွားရေးပဲ ဦးပါရဲ့ …
ဒီမနက်တောင် လှည်းတန်းပွိုင့်မှာ မီးစိမ်းက ၉၉ ပြနေရာကနေ ချက်ချင်းဘဲ အနီရောင် သုည ဖြစ်သွားလို့ တက်စီဆရာ က စိတ်မရှည်တော့ဘဲ ကွေ့ကျောကနေ မီးဝါဖြတ်ပြီး ဒဲ့ထွက်သွားလိုက်တာ ရုံးချိန်မှီသွားတယ်။ ကားဆရာကြည့်ရတာတော့ ဘာမှမဖြစ်သလိုပုံစံဘဲ။ ဒဏ်ငွေဆောင်ရမလားမသိဘူး။
ကိုထူးဆန်းရေ .. လက်မထောင်သွားပါတယ်နော် …
ဟိုတစ်ခါ တွေ့တုန်းကပြောသလိုပဲ …. ယာဉ်စည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဘလော့တစ်ခုထောင်ပြီးရေးတဲ့အကြံလေးလည်း ကောင်းပါတယ် …. ။လုပ်လည်း လုပ်သင့်ပါတယ် … ဒါမှ မြန်မာနိုင်ငံက ယာဉ်ထိန်းရဲ အချို့ တာဝန် မကျေတာ ၊ လစ်ဟင်းတာတွေအပါဝင် ၊ ယာဉ်စည်းကမ်း ချိုးဖောက်တာတွေကိုပါ မြင်ရမှာ … ။
ဒီလို စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တာတွေ ဖြစ်လာတာ … စည်းကမ်းမတင်းကြပ်လို့ပါ … တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုး မရှိပဲ … ၊ လာဘ်စားနေတာကြောင့် …. စည်းကမ်းဖောက်ရဲသူတွေ များသထက်များလာတာပါ .. ။
လာဘ်စားရတယ်ဆိုတာကလည်း …. သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေး … အပြည့်ဝမလောက်လို့ … ကိုင်းဒီတော့ .. ညောင်မြစ်တူးရင်း ပုတ်သင်ဥတွေ ပေါ်ကုန်ပြီ ….
စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး …… စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး … ဟိဟိ (နားရွက်နှစ်ဖက်ကိုလက်ဖြင့်ခပ်တင်းတင်းပိတ် ၊ မျက်စိကိုပိတ်ပြီး ခေါင်းကို စည်းချက်ညီညီ ခါရမ်းကာ .. အကြိမ်နှစ်ဆယ် အော်ဆိုပါရန် )
etone ရေ ။ ကျွန်တော်လည်း လေဘဲများနေသလိုဖြစ်နေတယ် ။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက်တော့ ဖမ်းကို မဖမ်းတာ ။ ဖမ်းရင်ကမှ ကိုရွှေယာဉ်ထိန်း လာတ်ဘဲစားဦး။ အိတ်ထဲပိုက်ဆံထိမှာစိုးတော့ ဆင်ခြင်ဦးမယ် ။
အခုဟာ က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက်က တပ်နဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေပြဿနာတက်ပြီး ဦးမောင်အေး ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကို ပွိုင့်တွေက နေ ရုတ်သိမ်းခိုင်းလိုက်ပြီးကတည်း က သူတို့လဲ သိပ်မဖမ်းတော့တာ။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး စည်းကမ်းမဲ့နေကြတာ ။
ကိုထူးဆန်းရေ …. ကားသမားတွေက … ယာဉ်ထိန်းရဲကို ပိုက်ဆံ လက်ထဲ ပေးနေတဲ့ ပုံ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရိုက်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတာ မအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ….. ။
နောက်ဆို ယာဉ်ထိန်းရဲဆိုတာ …. ဘာလုပ်တဲ့ လူမှန်းတောင် သိတော့မယ် မထင်ဘူး .. သူတို့ အလုပ် သူတို့ မလုပ်လို့ လေ … ။
သင့်အိမ်ပြန်ချိန်အား ဇနီး။ သားသမီးများက စောင့်ကြိုနေပါသည်…
ကိုထူးဆန်းရေ. တခုတ်တရနဲ့ ကြိုးစားရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးအတွက် ပင်ပန်းရကျိုးနပ်ပါတယ်
ဗျာ။အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်ပြင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးရမှာပါ။
ကားတွေ စည်းကမ်းမဲ့မောင်းနှင်ကြလို့ လမ်းပိတ်ဆို့တာတွေ၊ ယာဉ်အန္တရာယ် ကျရောက်တာတွေစတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ကြရသလို..
ဘေးအန္တရာက်ကင်းဖို့အတွက် နံနက်စောစော လမ်းလျှောက်သူတွေအနေနဲ့ လမ်းမပေါ်တက်မလျှောက်သင့်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ယာဉ်ကြော ပြောင်းပြန်လျှောက်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
နောက်ထပ်လမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အနှေးယာဉ်တွေအနေနဲ့လည်း စည်းကမ်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မနက်ဝေလီဝေလင်း သဘာဝအလင်းရောင် အားမကောင်းသေးတဲ့အချိန်မှာ လမ်းလယ်ခေါင်ပေါ် တက်နင်းတာ၊ ရောင်ပြန်ပြား မပါတာ၊ လမ်းကြောင်းလုတာတွေကိုလည်း အဆင့်ဆင့် ပညာပေးသင့်ပါတယ်။
မနေ့က.. မြောင်းမြဒေါ်ချိုမိသားစုနဲ့.. စကားပြောဖြစ်တာ.. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စကားတခုပြောပြချင်တယ်..
အခု.. ပို့စ်နဲ့လည်း ဆက်စပ်လို့ပါ.။
အယ်လ်အေက.. .. နေရာတနေရာနဲ့တနေရာပြောရင်.. မိုင်အကွာအဝေးနဲ့ပြောတာ.. အဲဒါ.. နေရာတခုနဲ့..တခု. မိုင်၁၀၀ဝေးတယ်ပြောမိပါတယ်.
“ငါတို့၁၀မိုင်ကမှ.. သွားနေရင်း..ဟိုကကားက၀င်တိုးလိုက်… ဘတ်စကားကလုဝင်လိုက်နဲ့.. စည်းကမ်းမရှိတာမို့.. ၁၀မိုင်သွားပြီးရင်.. တနေ့လုံးစိတ်ပင်ပန်းနေရော”တဲ့လေ..